[Puntland] Khilaafka Al-Shabaabka Galgala & Magacyada ragii hogaaminyay Weerarkii Bali-khadar
Saturday June 02, 2018 - 07:13:18 in Wararka by Super Admin
Puntland:-(Warbixin Dheer) Ciidamada bada Puntland ayaa caawa la soo weeraray laba Jiho ayaa laga soo weeraray, Saldhigoodii Bali-khadar, Sida Xog sheegayso, Ciidamadu aad bay uga Dayacnaayeen dhanka Wardoonka. In kastoo khasaaraha aan la shaacin
Puntland:-(Warbixin Dheer) Ciidamada bada Puntland ayaa caawa la soo weeraray laba Jiho ayaa laga soo weeraray, Saldhigoodii Bali-khadar, Sida Xog sheegayso, Ciidamadu aad bay uga Dayacnaayeen dhanka Wardoonka. In kastoo khasaaraha aan la shaacin laakiin labada dhinacba Guul bay sheegan- sida warku sheegayo. Qof goob jooge ah wuxuu sheegayaa inuu arkay laba Baabuur oo laga gubay Puntland, saldhigeena waxa la xaqiijiyay inay dib uga baxeen Ciidamada PL oo ay la wareegeen Kooxda A-Shabaab.
Yaa hogaaminayay Al-Shabaabka Buurta.
Maxamed Cabdulllaahi (Bataar) Magaciisa Xarakada uu Joogaana yahay (Abu-Hurayra) oo Beesha Habar-jeclo ah ayaa Hogaaminayay ciidamada Buurta ee Galgala waxana uu xidhiidh & gacan saar wanaagsan la leeyahay Xisbiga Kulmiye Xaaskiisa waxa lagu magcaabaa (Faaduma iimaan )waxana uu degen-yahay Magaalada Ceerigaabo.
Khilaaf baa soo kala dhexgalay dhawaan Ciidamada Al-Shabaab Dhexdooda waxana laysku qabtay markii Nin lagu magcaabo ( Maxamed Kutubo) oo Warsangali (Cumar ah) oo Madax Sare Ururkaasi ka ahaa uu xukumay Nin lagu magcaabo Ahmed Caraale' magaca Xarakada uga qoranina uu yahay (Abu-Xaniifa) Ninkaasi Xaniifa oo Reer Burco ah waxa lagu eedeeyay Bishii 03- 2018- inuu xidhiidh la sameeyay Hay'addo reer Galbeed isla markaana dil ku waajibay balse Ragii Reer Burco oo meesha awood ku leh ayaa Go'aanka Maxamed Kutubo Diiday taasina waxay keentaay in Koonfur xaalku gaadho oo Kooxda Al-Shabaab ee Koonfurta Somaliya ay u yeedho M.Kutubo halkaasi lagu xidho welina uu xidhan-yahay.
Magaalada Ceerigaabo oo Somaliland maamusho waa Meesha ay awooda xoogan ku leeyihiin Sahankooda & Saadkoodaba uu soo maro Saraakiisha Somaliland e Gobolkaasi amar buuxa oo madaxda Sare ah ayay haystaan inaanay Carqaldayn dhaq-dhaqaaqa Buurta Galgala.
Xoolaha & Raashinkaba waxa looga qaadaa Magaalada Ceerigaabo xitaa waxa jira sida warka sheegayo in ay Guriyo uga Kiraysanyihiin Magaalada oo qalab lagu farsameeyo.
Qaybta 2-aad xogtan waxaan ku eegaynaa Meesha dhaqaalahu uga yimaado, & Hubka- Yaase Bosaaso kala shaqeeya oo Wakiilo ah uga Guud ahaan Puntland.
Xuquuqda Qoraalka waxa iska leh Galgalanews.cm